Kay က-Age ကပြောပါတယ်
စက်တင်ဘာလ 10, 2012 တွင် 6:51 ညနေ
မကြာသေးမီကတိုးမြှင့် 0.8.4 Photoshelter စာမျက်နှာများနှင့်အတူပြဿနာရင်ဆိုင်ရ. အလံ icon ကိုရဲ့မှန်ကန်စွာမပြပါလိမ့်မယ်. ဒီနေရာမှာပြဿနာနှင့်အတူစာမျက်နှာ၏ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည် (စာမျက်နှာ၏အောက်ခြေတွင်); http://digiart.photoshelter.com/gallery-list
သည် PS! ကျွန်မပုံစံကို အသုံးပြု. ထောက်ခံမှုစာကိုပေးပို့ဖို့ကြိုးစားခဲ့, ဒါပေမယ့်ပေးပို့ဖို့ပျက်ကွက်ခဲ့.
စက်တင်ဘာလ 10, 2012 တွင် 9:14 ညနေ
သင် wp-content တွေကို / plugins ကို directory ကိုချိတ်ဆက်မှုကိုပိတ်ဆို့ထားပါသည်တူအမြင်, ဒါကြောင့်ရုပ်ပုံများဖြင့်မရယူနိုင်များမှာ, ငါသည်သင်တို့ကိုသင့်ရဲ့ .htaccess file ကိုစစ်ဆေးအကြံပြု
စက်တင်ဘာလ 11, 2012 တွင် 2:13 နံနက်
hi ကိုပြန်. ငါ plugins ကို directory ကိုအကြှနျုပျအား ftp ကိုနဲ့ Control access ကို log on လုပ်ပြီးပါပြီ, ငါသူတို့ကိုအကောင်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်; http://digiart.no/wp-content/plugins/transposh-translation-filter-for-wordpress/img/flags/ad.png
ငါသည်အခြားအရာတစ်ခုခု, ထိုအရပ်၌ရှိတယ်ထင်. ကိုယ်ကသာအ Photoshelter စာမျက်နှာများတွင်အဘို့ဤ anynymore အလုပ်မဖြစ်ဘူးသည်. လည်း, ငါသည်အ std မှ layout ကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင်, ကြောင့်ကောင်းစွာ photoshelter စာမျက်နှာတွေမှာအလုပ်လုပ်တယ်. brgds Kay
စက်တင်ဘာလ 11, 2012 တွင် 12:28 ညနေ
အဆိုပါပုံတွေကို photoshelter site ပေါ်တွင်မရယူနိုင်ခဲ့ကြ, ငါမူကားသင်က widget ကစတိုင်ကိုပြောင်းလဲကြည့်ရှု, ငါသည်သင်တို့ကိုဒီဖြေရှင်းချက်ကိုစိတ်ကျေနပ်မှုရှိပါတယ်မျှော်လင့်. 😉
စက်တင်ဘာလ 11, 2012 တွင် 7:44 ညနေ
ဟုတ်ကဲ့ကျေနပ်မှုရှိပါတယ်. Transposh တို့သည်ကြီးစွာသောထုတ်ကုန်🙂ငါနောက်ပိုင်းတွင် photoshelter accessright ကိစ္စကိုသို့ကြည့်ရှုမည်ဖြစ်ပါသည်. ငါသည်သင်တို့၏တုံ့ပြန်မှုထောက်ခံမှုနားလည်သဘောပေါက်.
စက်တင်ဘာလ 28, 2012 တွင် 6:33 နံနက်